UFC Fight Night Night - June 4 - Stake website - jluis37.com
Na-alụ ọgụ Fans, anyị alaghachila mma ụlọ nke ndi-mo-, Las Vegas ọzọ ụtọ Struggling Night kaadị. Kaadị a nwere ihe egwuregwu na-atọ ụtọ ma mgbe ezumike nke izu 1 gachara, anyị niile ga-ahụ n’anya ịlụ ọgụ na ịkụ nzọ. Mgbe kaadị a gasịrị, anyị na-aga ozugbo na Arizona maka ịkwakọba UFC 263. Ọ na-atọ ụtọ mgbe ọ bụla ịnwe mpempe akwụkwọ dị arọ d e kaadị ahụ, egwuregwu ndị dị na kaadị a bara uru na-akụ. Ka anyị banye n’ime!
Anyị enwetala onwe anyị banger na isi kaadi, mmadụ abụọ nwere ezigbo ọkaibe na-aga agha na naanị otu onyen’ime ha ga-akwụsịn’abalị ahụ na ọnụ ọgụgụ na-esote aha ha. Onye siri ike nke egwuregwu Santiago Ponzinibbio ga-anwude Miguel Baeza na-enweghị mmeri maka oche na Welterweight dining table.
Ndị UFC si na Santiago gụọ un t Ultimate Fighter Brazil na 2013, kemgbe ahụ abụrụla otun’ime ndị agha na-atọ ụtọ na-ede akwụkwọ. Mgbe mbido ọgba aghara malitere na UFC, Santiago gara n’ihu na ọgụ asaa na-enweghị atụ nke hụrụ ya ka ọ na-eti ndị ọkacha mmasị ndị mgbasa ozi nwere Mike Perry, Neil Magny na Gunnar Nelson, wdg.
Santiago bụ isi kickboxer na 15 obi ọjọọ knockouts, ma o nwekwara a pụrụ ịdabere na ala egwuregwu nke hụrụ un akpa 6 nrubeisi enweta nkwanye. E debere Santiago ka o nwee ike iche ihu na elitist gift na akwụkwọ akụkọ, mana ọ have been nnukwu nkwụsị ọrụ 3 afọ website Id egwuregwu na 2018 miniature kụọ aka t 1 gburugburu mgbe ọ laghachiri na mbido 2021. Ọ bụrụ na Santiago gosipụtara dị ka otu onye agha ahụ ọ bụ na 2018, e nwere ọtụtụ ndị na-alụ ọgụ t roster nwere ike iti ya.
Miguel Baeza bụ otun’ime atụmanya kachasị elu na UFC ugbu that a bụ onye hụrụ na Dana White’s Contender Series na 2019. Miguel nọ na mmeri 3-ọgụ t ọnụego 100 percent ngwụcha kemgbe ọ banyere UFC Octagon. Miguel dọtara uche ndị ọgụ ọgụ mgbe ọ kụpụrụ akụkọ UFC Matt Brown.
Miguel bụ otun’ime ndị egwu egwu agwakọtaghị agagharị na ndepụta na ọ dị njikere maka asọmpi. Baeza bụ isi onye na-egwu egwu na ụkwụ siri ike, ikpere ụkwụ, na ịkụ elu. Baeza kwadoro ịlụ ọgụ kacha mma na ijide UFC belt otu ụbọchị.
Nke a bụ ọgụ na-atọ ụtọ dịka ọ ga – abụ ọgụ ọgụ siri ike. Miguel ga-eji shouts its t cardio mee nrụgide na Santiago na-achọ ịkụpụ un gburugburu 2. Santiago ịbụ eriri ojii na BJJ ga-adabere na mgba un t agba ndị na-esote iji chịkwaa Miguel miniature mechaa mechaa.
Anyị kwenyere na nke a bụ ọgụ siri ike maka ma ụmụ nwoke ma ịbịaru nso nke nsogbu ahụ na-ekwu maka ya. Na mkpokọta, anyị chere na Miguel Baeza bụ egwuregwu ebe a ka ọ bụ nwata, agụụ, na njikere maka nnukwu ogbo.
Amụma – Miguel Baeza website Id Knockout – Mmehie Mmepụta- 2.75 (Nsogbu ndị that a ga-agbanwe, lezie anya mgbe nsogbu ga-adị na Stake)
Anyị nwere ihe mgbawa na omume-jurun’ọnụ isi ihe omumen’aka anyị; ọ na-atọ ụtọ mgbe ọ bụla enwere oke di na nwunye. Ọgụ a ga-ewepụ ụzọ maka otu n’ime anụ ọhịa ndị a ịma aka ise kacha elu nke ise nke nkewa ha. N’ime isi ihe omume, anyị ga-agba akaebe ọkwa 6 Jairzinho “Bigi Boy” Rozenstruik na-ewere ọkwa 9 Augusto Sakai.
Jairzinho banyere UFC dị ka onye agha 6-0 na-enweghị mmeri na ọtụtụ kụrụ aka knockouts na ọgụ un malitegharịa. Ọ garan’ihu ịkụ ọkpọ ọkpọ ọgụ 4 t mmeri twon’okpuru 30 sekọnd, nke a nyere un ohere ịlụ ọgụ ugbu a Eze Francis Ngannou. Nwa Bigi bịara dị mkpụmkpụ ma laghachi azụ na ngwa ngwa laghachi Octagon nke hụrụ un ka ọ na-akụda akụkọ akụkọ Junior Dos Santos.
Jairzinho enweela ezigbo ọsọ t – eme eme ihe ngosi 100 percentn’ime UFC Octagon nke mere ka ọ nwee mmasị na ndị na-agba ọgụ. Jairzinho bu ihe nlere anya nke nwere otu aka di ike na akwukwo UFC. Ọ ga-ele anya ịlaghachi na kọlụm mmeri ahụ na mpịji knockout dị egwu maka afọ.
Ihu Jairzinhon’izu that a buru ibu ga – ga abụ nke Braziln’aka un onwe un bụ Augusto Sakai. Sakai enweela otun’ime ihe kachasị mma na-ebugharị na ndi-mo-Ukwuu website t mmeri ise-ọgụ 5 tinyere nkata 3. Mmalite a dị egwu kwere nkwa Sakai ka ọ gbagoo na asọmpi na isi ihe omume na akụkọ Alistair Overeem. Sakai gara jiri mkpịsị ụkwụ na-akọ akụkọ akụkọ maka agba 5 mechiri emechi d e ọgụ dị nso. N’agbanyeghị agbanyeghị nsonaazụ achọrọ, Sakai gosipụtara na ya tozuru oke ịlụ ọgụ kachasị mma na ndepụta.
Sakai bụ onye na-agbawa agbawa mgbawa nwere nnukwu obi ike na-atụle ogo ogo ya. Website t oke ọrụ nke 73 percent, Sakai ekwenyeghị ịhapụ onye ọka ikpe ya ka ọ ga-achọ inweta ngwụcha izu a.
A na-enwe ike ikuku mgbe ikuku mgbe nnukwu ibu abụọ na-ese okwun’ime obere Octagon na ọgụ izu ụka a adịghị iche. Nke a ga – abụ nnukwu egwuregwu baseball ebe Jairzinho ga – ele anya ka ọ ga – enwe ndidi miniature chọta ọkpọ ọkpọ knockout zuru oke. O doro anya na Sakai ga-ele anya ka onye nche un debe un ma tinye ụda un t Bigi Boy. Ewezuga Eze Ngannou, ọ nweghị onye nwere ike ịkụtu ma ọ bụ tụda Jairzinho d e izu ụka a ekwesịghị ịdị iche.
Zọ nke mmeri Sakai bụ olu na obi, ọ ga-ada mbà Jairzinho ma mechaa nweta mkpebi ma ọ bụ mbubreyo TKO. Ọ bụ ezie na Jairzinho nwere ike ịkụ ọkpọ, ọ nwere minit 25 iji hụ otu ọkụ ahụ. Anyị na-adabere na obere ọkacha mmasị na Jairzinho ebe that a ma kwenye na ọ ga-enwe ike ịchọta ọkpọ yan’ikpeazụn’ọgụ a.
Amụma- Jairzinho Rozenstruik nke Knockout – Nsogbu Azụmaahịa- 2.40 (Nsogbu dịn’okpuru ịgbanwe, lezie anya mgbe nsogbu ga-adị na Stake).
Enwetaghị ọgụ ndị that a dị ịtụnanya naanị na https://ufcfightpass.com/ miniature nweta nsogbu kacha mma UFC naanị na Stake.com https://stake.com/sports/mma/featured